ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗွီအိုအေသီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (အပိုင်း ၁၊ ၂ - အပြည့်အစုံ)
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၄၃၆) ပြင်ဆင်ရေးမှာ အခက်အခဲတွေရှိနေသေးပေမယ့် ရအောင်ညှိနှိ်ုင်းသွားရမှာပဲဖြစ်ကြောင်း အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဖို့လိုနေတယ်ဆိုတာသိရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ သတ္တိရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်း ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေး ဆက်လက်တောင်းဆိုနေရတဲ့ သဘောထား၊ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အမြင် စတာတွေကိုလည်း ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းနဲ့ ဆွေးနွေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ ဗွီအိုအေသီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (အပိုင်း ၁၊ ၂၊ ၃ - အပြည့်အစုံ)
လက်ရှိပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ နဲ့ ၅၉ (စ) အပါအဝင် ပြုပြင်ရေးကိစ္စတွေမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ မပြုပြင်ရေးဘက်က ရပ်တည်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ဗွီအိုအေနဲ့ ပထမဦးဆုံးသီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NLD နဲ့ ၈၈ ပွင့်လင်းမျိုးဆက်ကနေ ကောက်ယူပြီး လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လူထုဆန္ဒလက်မှတ် (၅) သန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း တပ်မတော်အနေနဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ လူထုဆန္ဒတွေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာအုံးမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောနေတဲ့ လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးကိစ္စမှာတော့ လူအများကို ကိုယ်စားပြုဆွေးနွေးရင် ပိုပြီးသင့်လျော်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း ပထမပိုင်းကို နားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း နဲ့ ဗွီအိုအေ သီးသန့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း (အပြည့်အစုံ)
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေဟာ လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာမှ ဖွဲ့စည်းမယ့်လွှတ်တော် အသစ်မှာ အတည်ပြုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေကို သီးသန့် ထပ်မံ ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဗွီအိုအေ သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း (အပြည့်အစုံ)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာ လွှတ်တော်ကသာ အဓိက တာဝန် အရှိဆုံးဖြစ်ပြီး သမ္မတနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ ရဲ့ အဆုံးအဖြတ် မဟုတ်ဘူးလို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည် တပြည်လုံးကိစ္စကို လူလေးယောက် ထဲနဲ့ ဆွေးနွေးတာဟာ မပြည့်စုံဘူး လို့မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆိုတဲ့ လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး အပေါ် တုန့်ပြန် ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အဲဒီလိုပြောတာပါ။
Myanmar Times သတင်းဌာနမှ RCSS ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အင်တာဗျူးခြင်း
သြဂုတ်လ (၂၇) ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်
Q.1. တိုင်းရင်းသားဒေသအတွင်း တပ်မတော်ရဲ.စစ်ရေးနှင့် အခြားလှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်ဘယ်လိုထင်မြင်ပါသလဲ?
A.1. သျှမ်းပြည်တွင်းမှာအခြေချ လှုပ်ရှားနေတဲ. တပ်မတော်စစ်တပ်တွေအပေါ် ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ. တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ဖို.မျှော်လင့်နေပါတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ.ပါတ်သက်လို. နားလည်မှုတွေပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် အသေး စိပ်ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို.လိုပါတယ်။ မိမိတို. သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) အနေနှင့်လည်း တိုင်းပြည်ကြီးအေး ချမ်းသာယာရေးအတွက်ပဲမျော်ကိုးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထာ၀ရတည့်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိသည်အထိ ဆွေးနွေးသွား ကြဖို.လိုပါတယ်။
You are here: Home အင်တာဗျူး